Posted: January 9, 2010 in article आहा	3
Basanta says:	January 9, 2010 at 9:38 am	प्रश्नोत्तर साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। उत्तरहरु हेर्दा हाम्रो नयाँ नेपाली पुस्ताप्रतिको आत्मविश्वाश झन् बढ्यो ममा। मलाई जहिलेपमनि लाग्छ, हामी नेपालीहरु सबैतिर सक्षम र चिन्तनशील छौं तर जो राजनीतिमा छन् तिनले यस्तो सक्षमता र चिन्तनशीलता देखाउन सकेका छैनन्। अहिलेको राजनीति हाम्रो एउटै महारोग हो। र लोगोको कुरा। नेपालीपन झल्किन्छ कि झल्किन्न त्यो वहसको विषय हुनसक्छ किनभने हामीले नेपाली भनेर मानिआएका धेरै प्रतीकहरु यसमा समाविष्ट छन्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने, यो अत्यन्त भद्दा र कलात्मकतावीहिन छ। राम्रा कुराहरु अटेसमटेस खाँदेर राख्दैमा सौन्दर्य झल्किन्छ भन्ने मूर्खता हो, सौन्दर्यका लागि सन्तुलनको पनि उत्तिकै जरुरत हुन्छ। हाम्रा राज्यसंचालकहरुको कलाचेत कति तल्लो स्तरको छ भन्ने कुरा यहि लोगोले देखाऊँछ।
Aakar says:	January 9, 2010 at 10:21 am	हा हा हा, साह्रै गज्जब को लाग्यो अन्तर्वार्ता । कसैलाई झटारो हान्न त अमेत्य बाट सिकयोस् ! तर एउटा कुरा, यो ईनभर्टेड कमाहरु चाँहि किन सबै उल्टो हँ, कि यसको नि अर्थ छ ! हा हा हा
Ashesh says:	January 9, 2010 at 10:28 am	आहा! कति राम्रो कुरो उठाउनुभयो । प्रश्नोत्तर पढ्न रमाईलो भईरहेको थियो अन्तिमको कुरो त ठ्याक्कै मुटुमै गाडियो । लोगोकोक कुरो साँच्चिकै सोचनिय छ ।
….. आखिर के बेचु म ???	GRE का प्रखर प्रवक्ता, आजको सन्दर्भमा	Meta	Register	Log in